Ireo no vaovao ao amin'ny fanavaozana ny Google Hangouts | Vaovao momba ny gadget
Ireo no vaovao ao amin'ny fanavaozana ny Google Hangouts
Betsaka ny ezaka natao tao amin'ny Google mba hahafahana manana ny tambajotran-tseraserany sy ho an'ireo mpampiasa mba hiafara amin'ny fampiasana ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo. Na eo aza izany rehetra izany, ity dia iray amin'ireo olana goavana amin'ny orinasa satria toa tsy nahatratra ny fahombiazana andrasana ny Google Hangouts na i Allo.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia manaitra indrindra ny tsy mbola fanipazan'ny Google lamba famaohana ary tonga ny fotoana fametrahana filokana vaovao. Ny hevitra dia ny hampivelatra vaovao fivoarana ho an'ny Google Hangouts amin'izay dia azo apetraka ho toy ny sehatra ho an'ny fandefasana hafatra eo noho eo izay tian'ny orinasa, karazana mpifaninana lava ho an'i Slack.
Ny evolisiona dia misy famoronana rindranasa roa fantatra amin'ny anarana hoe Chat and Meet, samy afaka miara-miasa sy misaraka satria samy manana tanjona hafa tanteraka izy ireo, heverinay fa miaraka amin'ny hevitra fa afaka manitatra bebe kokoa ny ekosistra fampiharana Google ary manatsara ny fifanarahana amin'ireo serivisy hafa.
1 Mifanena amin'i Google Hangouts.
2 Google Hangout Chat.
Mifanena amin'i Google Hangouts.
Voalohany indrindra dia manana ny fampiharana fantatra amin'ny anarana hoe Meet, izay amin'ny ankapobeny dia misy vokatra iray izay ahafahantsika mamorona video antso, fampiasa efa natolotr'i Google Hangouts fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nohavaozina indray, araka ny filazan'ny orinasa, mba ho tsotra kokoa, manam-pahaizana kokoa ary maoderina kokoa.
Anisan'ireo zava-baovao lehibe, angamba ny tena mahaliana, ny nahavitany nampihena be loatra ny fanjifana angona na amin'ny PC na amin'ny finday raha oharina amin'ireo kinovan'ny rafitra teo aloha. Ho antsipiriany, lazao aminao fa azo alaina ao amin'ny Google Play izao ity rindranasa ity.
Google Hangout Chat.
Raha ny momba ny Chat, araka ny tondroin'ny anarany dia miresaka momba ny fampiharana fandefasan-kafatra toa izany izahay, amin'ireo asa efa fantatra, nampiana ny safidy, ao anatin'io vondrona io ihany, ankoatry ny resaka ataon'ny tsirairay, ny fantsona dia azo foronina amin'ny afaka miresaka zavatra manokana kokoa isika nefa tsy manelingelina ireo mpampiasa hafa. Amin'ny maha antsipiriany azy dia lazao aminao fa io dia iray amin'ireo fiasa ampiasaina indrindra amin'ny Slack.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ireo no vaovao ao amin'ny fanavaozana ny Google Hangouts
Hitanay ny lalao minitra 30 an'ny Mass Effect: Andromeda
DeepCoder dia afaka mamorona ny programa sy ny fampiharana azy manokana